Indlwana ✨Yekilasi, Esesitayeleni, Esezingeni Eliphezulu & Ehlukile✨ - I-Airbnb
Indlwana ✨Yekilasi, Esesitayeleni, Esezingeni Eliphezulu & Ehlukile✨
Greytown, Wellington, i-New Zealand
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Kate
I-Classroom Cottage yethu iyindawo ye-bliss yabelusi eceleni kwezinsimu zezinkomo nomfudlana ojingayo e-idyllic greytown. Yayikade iyindlu yesikole, indawo iguquliwe yaba indawo esesitayeleni, enokuthula enosilingi ophakeme, ubuciko obungavamile nobuhle bezinto zakudala.
Jabulela ukubukwa okuhlaba umxhwele kwezingadi, idlelo eliluhlaza kanye nesihlahla sendabuko kusuka emphemeni wakho wangasese. Noma uhambahambe ezihlahleni zethu zezithelo ezivutshiwe futhi ukhulise imibhede ye-veggie, nezingcingo ze-tuis ne-pukekos ukukugcina usondelene.
I-Classroom Cottage iyimfihlo enendawo yayo yokungena, futhi iqukethe ngokuphelele. Kunomshini wokuwasha/wokomisa izingubo nosinki we-scullery wokugeza egumbini lokugezela. Ikhishi linesiqandisi, i-microwave nesitofu sikagesi esinamapuleti amabili, kodwa sicela uqaphele ukuthi alikho uhhavini noma i-freezer.
Isakhiwo sohlelo oluvulekile sisho ukuthi silungele kahle abantu ababili, nakuba indlwana yengane noma umatilasi ophekuzelayo ungahlelelwa labo abathandekayo. Ngezingane ezifuywayo, indawo iseceleni komgwaqo othulile futhi ebiyelwe, kuyilapho umfudlana ngakolunye uhlangothi ubiyelwe nge-square netting, ngakho ngeke bakwazi ukutshuza bese bexosha izinkomo - sicela ubone izithombe ezimbalwa zokugcina ukuze uthole imininingwane eyengeziwe ebukwayo.
Ezinyangeni zasebusika ezipholile, impompi yokushisa igcina indawo ithokomele kakhulu, futhi kukhona nengubo kagesi embhedeni, kanye namabhodlela amanzi ashisayo.
I-Greytown ejabulisayo eyakhiwe esihlahleni i-Main Street ikude ngemizuzu emithathu ngemoto (uhambo lwehora eliyingxenye), nezitolo zayo ze-boutique, amathilomu amahle kakhulu nezindawo zokudlela, kanye nezakhiwo ezindala ezinhle. Situsa kakhulu amakhekhe obuciko kanye nekhofi ku-The French Baker!
Siphinde sitholakale ngokuphelele ukuba sifike e-Martinborough - izivini ezidumile zedolobha, izindawo zokudlela nezitolo ziqhele ngemizuzu eyishumi nambili ngemoto.
Noma yini oyidingayo, vele usazise! Sidlula esangweni elimnyama ngakwesokudla njengoba ufika futhi siyakujabulela ukuphendula imibuzo, senze ukusikisela futhi sinikeze noma yini eyengeziwe ongayidinga!
Hlola ezinye izinketho ezise- Greytown namaphethelo